Hubsiimo – Bayan Research
1 | |http://www.Bayanresearch.org/
Hubsiimo (1): Ha rumaysan wax kasta oo aad akhrido ama daawato
Xog-khaldan & Xog-xumo (Misinformation & Disinformation)
Xogta tirada badan ee lagu wadaago internetka (Online-ka) ayaa isugu jirta run iyo been badan, taas oo dadka qaar ku keenta jaahwareen ay kala garan waayaan wax ay rumaystaan. Marka la tilmaamayo xogta beenta ah ee la isku waydaarsado baraha bulshada, waxaa la adeegsadaa labadan eray-bixinood:
 Misinformation – Macluumaad khaldan
 Disinformation – War-xumo
Qoraalkan waxan ku eegaynaa waxa ay ku kala duwanyihiin labada eray, saamaynta ay ku leeyhiin ra’yiga dadwaynaha iyo siyaabaha loo aqoonsado, isla markaana loola tacaali karo.
Inkasta oo wararka been-abuurka ahi ayna ahayn wax cusub, haddana waxa ka dhigay kuwo halis badan wakhtigaan la joogo, sida fudud ee loogu faafin karo internetka guud ahaan, baraha bulshadana gaar ahaan.
Iyada oo Af-Somaali ahaan labada erey ay isku macno dhawyihiin, haddana qeexitaanka ayaa kala soocaya. Kala soociddaasi waxay muhiim u tahay sida dowladaha, shirkadaha iyo bulshadu guud ahaan uga falceliyaan been-abuurka iyo wararka khaldan.
Macluumaadka khaldan iyo war-xumaduba waxay la xidhiidhaan macluumaad aan sax ahayn, waxaase kala saaraya labada waa ujeeddada qoraaga iyo ogaanshaha in xogtu been tahay.
Waakan qeexitaanka labda eray:-
 Macluumaad khaldan (Misinformation): Faafinta war khaldan, iyadoon loo eegin ujeeddada in cid lagu marin-habaabiyo, sida la wadaagidda xayeysiis xun ee ololaha doorashada ee ku saabsan musharraxa siyaasadeed, adoon hubin in ay run tahay, ama isa sii dhafinta fariin WhatsApp oo xog aan la hibin xambaarsan.
 War-xumo (Disinformation ): Waa xog xun, sheekooyin been abuur ah, iyo dacaayad si ula kac ah loo faafiyo, iyadoo looga danleeyahay marin habaabin. Tusaale ahaan, samaynta sheekooyin been abuur ah oo ka dhan ah shahksiyaad, axsaab siyaasadeed, hay’ado, ama mabaadii’. Ujeeddooyinka laga leeyahay waxaa ka mid ah jaahwareerin iyo raadaynta ra’ayiga dadwaynaha ee ku aadan dhacdo, fikrad, ama jiho gooni ah. Si shacbiyad (Views, subscribe) loo helana dadka qaar way u sameeyaan iyaga oo aan dan ka lahayn dhibka ay keenayso.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee War-xumadu waa faragelintii Ruushka ee doorashada madaxtinnimada Maraykan ee 2016kii, iyadoo la adeegsanayo xayeysiisyada Facebook, bogagga (Facebook-ga), iyo kooxaha gaarka ah (Facebook groups). Ruushka ayaa bartilmaameedsaday gobollo gaar ah oo badanaa isbeddela siyaasad ahaan si ay ugu faafiyaan
2 | |http://www.Bayanresearch.org/
dacaayad ka dhan ah musharrixii xisbiga dimuqraadiga ee Hillary Clinton, taas oo ka dhex abuurtay kala qaybsanaan dadka Mareykanka ah.
Bulshada Soomaalidu waxaa inta badan la arkaa sheekooyin macno daran, oo hadana aad loogu faafiyo meelaha lagu xidhiidho sida WhatsAppp ka iyo baraha bulshada ee kale. Dad badan ayaa warka u raadsada Youtube-ka qaab TV u warrama, haddana macluumaad cad aan ka bixinin cidda wariyaashooda ah, ilaha wararka ay ka helaan, iyo waliba hadii cid kafaala qaadday ay jirto oo ujeeddo gaar ah ka leh.
Halista aya leeedahay xogta khaldan iyo kuwa xun
Halista ugu badal ee laga dhaxlo warka-khaldan iyo war-xumadu waa; in dadku kala garan waayaan wararka dhabta ah iyo kuwa been abuurka ah, taasoo abuurta kalsooni darro, jahawareer, iyo isfaham la’aan ku saabsan arrimaho muhiim u ah bulshada, sida:-
1. Caafimaadka – sida tallaalada guud ahaan, si gaar ahna Covid-19 ka oo laga faafiyo xog been abuur ah, oo keentay dadka qaar in ay qaadan waayaan tallaalkaas.
2. Ammaanka dalka – sida warar aan sal iyo raad toona lahayn oo la faafiyo, kuwaas oo keeni kara nacayb iyo isku-dhac qaybo ka mid ah bulshada.
3. Aqoonta diinta iyo ku-dhaqankeeda – sida faafinta fatwooyin ama axkaam ka mid ah diinta Islaamka, taas oo dad badan ay ku dagmi karaan.
4. Ra’yiga dadwayanaha oo loo jiheeyo meel aan habboonayn – tallaabadan waxaa ku dhaqaada kooxaha danaha gaarka aha leh, xisbiyada siyaasadda, iyo xataa xukuumadaha oo dhammaantood ku loollamaya jihaynta ra’yiga bulshada iyaga oo usoo gudbiya xog xun ama qaldan si ay u helaan taageeradooda.
Sida ay sheegtay daraasad 2018kii lagu daabacay Joornaalka Science oo uu sameeyay mac-hadka MIT, waxay ogaadeen in been-abuurku 70% lagu faafin ogyahay “retweeted” Twitter-ka marka loo eego xogta runta ah. 
Hadaba Sidee loo aqoonsadaa Macluumaad khaldan (Misinformation) iyo War-xumada (Disinformation )?
Waxaa laga yaabaa in aad is waydiiso sida loo garto wararka been abuurka ah ee Facebook iyo baraha kale ee bulshada lagu faafiyo? Sidee uga fogaan kartaa macluumaadka beenta ah? Sideed uga fogaan kartaa in si lama filaan ah xogaha qaldan la wadaagto baraha bulshada?
Cidda abuurtay mcalumaadkan ama la wadaagaysa, Iska hubi isha xogta soo tabisay iyo ujeeddooyinkooda. Haddii warka ama macluumaadka uu kula wadaagay saaxiibkaa, qiimee oo iswaydii ma la aamini karaa? xogtani miyay leedahay ilo lagu kalsoonaan karo? Kadib go’aanso in aad la falgasho ama ka gaabsato.
Xogta aad aragtay ma leedahay ilo kale oo lagu kalsoonyahay. Waxaa dhacda marar badan in xog xun ama qalan ay ka soo baxdo hal il, halka la wadaagitaanka babdan owgeed ay u muuqto in ay tahay xog ilo badan oo sax ah leh.
3 | |http://www.Bayanresearch.org/
Sawirrada la socda wararka iyo xogta been abuurka ahi waxay u badan yihiin kuwo la isa saaray oo samays ah, maqal iyo muuqaalkana qaarkooda waa la abuuri karaa iyada oo la isticmaalaayo tiknoolajiyada loo yaqaanno “Deepfake”  oo suurta galisay in la isku toli karo qofka iyo muuqaalka ama sawir aysan waligood ka qayb qaadan.
Nuxurka isdaba jooga ah ee baraha bulshadu (Social media content feeds) inta badan waxay mudnaan siisaa nuxurka u sarreeyo heerka ka qaybgalkiisa, taas oo ah, inta jeer ee la wadaago, la jeclaado, ama laga faalloodo, halkii ay ahayd in lagu saleeyo mudnaanta xaqiiqda xogta. Shirkadahaan ayaa loo arkaa goobo (Platform) halkii ay ka ahaan lahaayeen daabacayaal (Publisher) masuul ka ah wixii lagu soo qoro barahooda, taas oo macnaheedu yahay in aan sharci ahaan loo raacan karin, si la mid ah warbaahinta kale sida TV-yada, jaraa’idada, iyo idaacadaha, iyaga oo soo xiganaya qaanuunka lo yaqaano (section 230 – US law) . in kasta oo ay tani isbeddeli karto marka la eego dhaqdhaqaaqyada ka socda cogresska Maraykanka ee ku aaddan arinta.
Isticmaaluhu ma doorto macluumaadka uu rabo ee waxaa u doora “Artificial Intelligence” oo ah hab si toos ah u kala saaraya nuxurka la tusayo isticmaalayaasha, iyadoo lagu salaynayo waxa uu la wadaago, faallana ku bixiyo. Algorithm-yadu waxay bartaan nooca uu isticmaaluhu xiiseeya waxayna tusaan waxyaabo kuwaas ka agdhaw run iyo been kay noqotaba.
Haddaba, sida jidhku ugu baahanyahay cunto miisaaman oo la hubo waxay ka samaysantahay, ayay maskaxduna ugu baahan tahay xog iyo macluumaad lagu kalsoon yahay.
Ogow oo iska hubi waxaad akhrinayso ama daawanayso sababtoo ah waxay noqon doontaa qayb ka mid ah fikirkaaga iyo dhaqankaaga. Ka hortaga macluumaadka been-abuurka ah.
Haddii aad internetka ku aragto xog been ah:-
 Ha la wadaagin cid kale.
 Haddii aadan aqoon isha xogta, xaddid ka falcelintaada.
 Ka qayb qaado faafinta xogta runta ah intii aad awooddo, waayo waa madal run iyo beeni ku loollamayaan
 Iskuday in aad ka wacyi galiso.
Dhanka kale, Facebook, Twitter iyo Google waxay bilaabeen in ay la shaqeynayaan dowlado ay ka midyihiin USA, UK iyo Canada si loola dagaallamo macluumaadka khaldan iyo fikradaha shirqoolka, gaar ahaan kuwa ku xeeran tallaalka Covid-19.
Inkasta oo ay adagtahay in gabi ahaan la tirtiro dhammaan wararka xun ama been-abuurka, haddana waa la abuuri karaa jawi lagu xakamayn karo sida ay kala halis badan yihiin marka ay iskaashadaan isticmaalayaasha, shirkadaha, iyo dawladuhu.
4 | |http://www.Bayanresearch.org/
Xogta xun waxay baabi’isaa nolosha, iyo kansoonida u dhaxaysa bulshada, dhammaanteenna mas’uuliyad ayaa inaga saaran la dagaallankeeda halkii aan ku aragno.
 Stanford.edu news “why-ai-struggles-recognize-toxic-speech-social-media”